CHERECHEDZA: Edza kudzivirira 'kubiridzira' iyo kodhi kodhi paWordPress, zvinoita kuti kukwidziridze kuve nyore. Ndine 'hacks' mashoma asi ini ndinochengeta zvakanyorwa kuitira kuti pandinotora download yazvino vhezheni, ndinogona kugadzirisa zvangu ndofambira mberi. Uyezve dzivisa kuisa chero mhando remhando mafaira kana maforodha mune chero dhairekitori kunze kweako netori-gutsikana forodha.
Chero bedzi iwe usati wabira WordPress, iyo yekuvandudza maitiro yakatwasuka-kumberi (Mifananidzo ndeye Kutya Kuendesa 3.5.5)
Apple-Shift-3 uye iyo skrini inoponeswa pane desktop yangu. Kwete 'Dhinda-Screen' kana 'Alt-Dhinda-Screen', Vhura Illustrator, namatidza, chirimwa, chengetera webhu, saizi, seta mufananidzo mhando, chengeta.
🙂 Zviri nyore kwazvo!
Ini ndichangobva kugadzirisa yangu chena yekare iBook G3. Iyo inomhanya Tiger zvakakwana uye kuitora ichipatsanurana uye kuidzosa pamwe chete zvakare yaive mhepo yekutenda kune ifixit.com's anobatsira magwara. Iwe haungakwanise kutaura izvozvo nemaPC kunze kwekunge iwe uri nyanzvi pakuzvibvisa; ini, handisati ndamboita chero chinhu chakadai.
Kana iyo PC ikazofa, mhuri yedu, pazvishoma, ichaenda kuMac Mini. Ini handina kana basa rekuenda padhuze chero komputa inomhanya Vista.
Wataura chokwadi nezve OS. Iyo GUI inoshamisa uye inonzwisisika.
Ingo pedza iyo yekuvandudza, yakashanda w / o chero matambudziko. Ndatenda!